Elitholakele Hacks Russell - Uphondo Of The Day
Into yokuqala uzofunda mayelana Funnels e 2018 wukuthi Russell Bronson yiyona onguchwepheshe ethandwa kakhulu ngesihloko kulezi zinsuku futhi konke endaweni.
Lena akuyona nje kwaqondana, lokhu uyakhazinyuliswa ukumaketha.
Le ndoda uyakwazi ukuthi uphathwa kanjani funnels usebenzisa izindlela yokuziphatha empeleni ukusebenza.
Izindawo ze-Google phezulu "Elitholakele Hacks Russell" uzobese kuholele yakhe khulula ukuqeqeshwa webinar lapho uchaza Waqhubeka kanjani ukuba iqoqe nomholo lousy ekwenzeni umsebenzi eqashiwe sokwakha uphondo niche lokho kumenza uhola $18,000 usuku.
Lo muntu ingahambi cishe the hlahla, waba ukuthengisa umkhiqizo izinga phezulu ukuthi okwenza kuye imali futhi kusuke uzimisele babelane nabo ngezimfihlo zokuthola yakhe kunoma ubani uzimisele ukusebenza kanzima ukuze abe inkosi ikusasa lakhe.